पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी स्वदेश फिर्ता – Setosurya
काठमाडौं । दुई दिने भ्रमणका सोमबार नेपाल आएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहीद खकान अब्बासी स्वदेश फिर्ता भएका छन् । अब्बासी सोमबार अपराहृन काठमाडौं आएका थिए । उनलाई टुँडिखेलमा नेपाली सेनाले ‘गार्ड अफ अनर’ दिएको थियो भने साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
अब्बासीले मंगलबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए । अब्बासीलाई विदाइ गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्रिभुवन विमानस्थलसम्म गएका थिए ।
बालुवाटारमा नेपाललाई ओलीको ‘सरप्राइज’
विमानस्थलमा भारतीय एअर मार्सल राख्न नदेऊः विजुक्छें
आज संसदमा देखिए यस्ता दृश्यहरु : (फोटो फिचर)
देउवाले कसलाई बनाउलान् उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ?
यसरी चुनिँदै छन् स्थानीय प्रतिनिधि, कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो
पर्वतमा अख्तियार दुरूपयाेगकाे यस्ताे डरलाग्दाे तथ्य, कुन कुन कार्यालय छन् अख्तियारकाे फन्दामा ?
मुलुक गम्भीर वित्तीय संकटमा
कांग्रेसले सरकार नछाड्ने, सत्ताका लागि यस्तोसम्म गर्ने तयार भयो कांग्रेस !
पर्वतकाे सशस्त्र प्रहरी वल चण्डिका गणकाे यस्ताे पराेपकारी काम……
पर्वतको लप्सी अमेरिकामा